Moodo iyo isbeddello: Jilaaga Hollywood-ka ee haatan ugu labiska wanaagsan | Ragga Stylish
Jilaaga Hollywood-ka ee haatan labis fiican
Paco Maria Garcia | | Isbeddellada
Waxaa jira jilayaal badan oo Hollywood ah oo u taagan qaabkooda gaarka ah. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta laga hadlayo xarrago, Jilaaga Hollywood ee haatan sida ugu fiican u labista ayaa ah, shaki la’aan, Ryan Gosling.
Jilaagan wejiyada badan iyo nin qoys marna kama maqna liistooyinka ugu habboon iyo isbeddellada hadda socda.
1 Ryan Gosling: Jilaaga Hollywood-ka ee haatan ugu labiska wanaagsan
2 Ryan Gosling iyo sirta labiska wanaagsan
Ryan Gosling: Jilaaga Hollywood-ka ee haatan ugu labiska wanaagsan
Ryan Gosling qaabkiisa iyo xarragodiisa ayaa u dhigay inuu yahay jilaaga ugu labbiska wanaagsan Hollywood-ka maanta. Joogitaankiisa ayaa badanaa lagu xaddidaa qiimeynta kuwa ugu xarrago badan wuxuuna qaabkiisa ka dhigtay mid lagu daydo. Sababaha tani waa kuwo cad: aan nadiif ahayn, xoogaa khatar ah, laakiin had iyo jeer u labisan sida munaasabadda.
Ryan Gosling wuxuu ka keenaa qaabka iyo xarrago dabeecaddiisa halyeeyga ah Jacob Palmer filimkii Crazy Stupid Love ee nolosha dhabta ah. Hufnaanteedu waxay ka baxsan tahay labiska naqshadeeyayaasha caanka ah, inkasta oo dabcan, wax badan ayey caawisaa.
Ryan Gosling iyo sirta labiska wanaagsan
Shaki la’aan Gosling wuu ogyahay qaaciddada sirta ah ama dheelitirka saxda ah ee dharka wanaagsan. Shirkadda caanka ah ee reer Talyaani ee naqshadeynta sameysa ee Gucci ayaa ka mid ahayd xulafada ugu weyn ee jilaaga marka ay timaado dhalaalka rooga kala duwan ee casaanka ah.
Jilaagan caanka ah ayaa ka tagaya aaggiisa raaxada marar badanaana wuxuu qatar galiyaa inta laga hadlayo moodada. Si kastaba ha noqotee, wuxuu maamushaa inuu si fiican isugu daro isbeddellada cusub iyo qaababka ugu caansan.
Sidan oo kale, marwalba dharkiisa ayaa ku jira dhar cad oo qurux badan oo XNUMX% suuf ah ama shaati dhar xariir ah, suudooyin ku habboon, kabo qurux badan oo u dhigma dharka iyo dabcan, muraayadaha indhaha qaarkood.
Ryan Gosling shaki la'aan, waa jilaaga haatan Hollywood ka ah ee ugu labiska wanaagsan. Qaabkeeda aan fiicnayn waa isku-dhafka ugu fiican ee u dhexeeya isbeddellada moodada cusub iyo naqshadaha ugu caansan. Mid kale oo ka mid ah guulaha waaweyn ee uu gaadhay waa inuu had iyo jeer u labisto hadba munaasabadda. Jilaagan wejiyada badan wuxuu kasbaday in ka badan inta boos ka helay kuwa ugu quruxda badan waqtiga oo dhan.
Ilaha sawirka: Ogow Meme
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Jilaaga Hollywood-ka ee haatan labis fiican
Wadar ahaan fiiri miyir iyo diirran
Loafers: sida loo xiro kabo moodada guga